सडक डिभिजन परिसार लाई “मिनी सिहदरबार” बनाउन शंकर पोख्रेलले नचाहेकै हुन ? - Butwal Online
सडक डिभिजन परिसार लाई “मिनी सिहदरबार” बनाउन शंकर पोख्रेलले नचाहेकै हुन ?
बुटवल, २६ बैशाख
सडक डिभिजन लाई “मिनी सिहदरबार” बनाउन शंकर पोख्रेल नै लागि नपरेको खुलेको छ । पुर्वधार व्यवस्थापन समितिले बुटवलको सडक डिभिजन कार्यालय परिसरलाई “मिनी सिहदरबार” बनाउने प्रस्ताव दिएपनि मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलकै कारण “मिनी सिहदरबार” नभएको नेकपाकै नेता बीच चर्चा चल्न थालेको छ ।
दाङ बाट निर्वाचित भएका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल निर्वाचनको समयमा दाङलाई राजधानी बनाउन मुल एजेण्डा सहित निर्वाचनमा होमिएका थिए । बुटवलको मध्यभागमा रहेको सडक डिभिजन कार्यालय परिसरको करिव १५ विघा क्षेत्रफलको जग्गामा प्रदेशका लागि सवै कार्यालय राख्न ४६ वटा भवन आवश्यक पर्ने भएकाले खुला र हरियाली हुने गरी गुरु योजना बनाएर मिनि सिंहदरबार बनाउन सकिने सहितको प्रतिबेदन समितिले सरकारलाई दिएको थियो ।
तर जग्गा प्राप्तीका लागि मन्त्रीपरिषद्को निर्णय हुनेमा अहिले सम्म निर्णय हुन सकेको छैन । प्रदेश बाट मन्त्रीपरिाषद्को बैठकले उक्त प्रस्ताव निर्णय गरेर संघिय सरकार लाई पठाएपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्ने भएपनि निर्णय नै नहुँदा मिनी सिहदरबार नाम मात्रको भएको छ ।
“हामीले प्रतिबेदन त दियौ, तर मन्त्रीपरिषद् बाटै स्वीकृत भएन, यसले समिति बन्नु, नबन्नुको खास अर्थ राखेन” समितिका एक सदस्यले बताए । स्थायी राजधानीका लागि आवश्यक पुर्वाधार सडक डिभिजन भित्रै पुग्ने त्यी सदस्यको दावी छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले सेमलारमा ७ विघा जग्गा उपलब्ध गराएको छ भने परिसर भित्र रहेको राजश्व कार्यालयलाई पनि देविनगरमा १२ कठ्ठा जग्गा दिने सिफारिस भइसकेको छ । नेपालगञ्जमा अख्तियार कार्यालय भएकाले बुटवलको कार्यालयलाई मर्ज गरिने प्रस्ताव समितिले गरेको थियो । हेवि ईक्युमेन्ट कार्यालय पनि सेमलार सडक डिभिजन परिसरमै राख्न सकिने बताइएको छ । त्यति मात्र हैन अहिले अख्तियारले निर्माण गरेको भवनमा मुख्यमन्त्री निवास राख्ने मनसाय समेत मुख्यमन्त्रीको रहेको बुझिएको छ ।
पुर्वधार निर्माणमा २० खर्ब आवश्यक
पुर्वधारको अभाव देखाउँदै प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल राजधानीको विषयलाई लम्बाउँदै लगेका छन् । “अहिले राजधानी कहाँ बनाउने भन्दा पनि कस्तो बनाउँने” तर्क पोख्रेलले अगाडि सारेका छन् । तर ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा रुपन्देही पुर्वधारमा बलियो भएको तर्क भने सरकारकै प्रबक्ता गर्छन । मंगलबार मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा सरकारका प्रबक्ता बैजनाथ चौधरीले अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश नं. ५ बलियो भएको तर्क गरेका थिए ।
प्रदेशको आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशत भन्दा माथी भएको उनले बताए । पुर्वधार नभएका कारण कार्य सञ्चालनमा कठिनाई भएको बताउँने मुख्यमन्त्री र एक बर्षको अवधिमा अन्य प्रदेशको तुलनामा पाँच नं. प्रदेश अव्वल रहेको बताउने प्रबक्ता बीच कुरामा तालमेल देखिदैन । अहिलकै अवस्थामा प्रदेश राजधानीका लागि पुर्वधार निर्माणमा २० खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । “बुटवल बाहेक अनेत्र राजधानी सार्दा २० खर्ब पुर्वधार निर्माणका लागि मात्र बजेट आवश्यक पर्छ, यति ठुलो बजेट प्रदेश सरकारले छुटाउनै सक्दैन“ समितिका एक सदस्यले भने–“कुनै दातृ नियाय बाट पनि यो सम्भव देखिदैन ।”